OS X Lion and MM Unicode - MYSTERY ZILLION
OS X Lion and MM Unicode
July 2011 edited July 2011 in Mac
ကျနော်.. OS X Lion GM version ကိုသွင်းပြီး built-in ပါလာတဲ့ မြန်မာယူနီကုတ်ကို စမ်းသပ်ထားတဲ့ပုံတွေပါ။ တချို့ပုံတွေကိုတော့ <a href="http://www.saturngod.net/news/lion-that-made-me-cry">ကိုစေတန်ကသူ့ရဲ့ဆိုဒ်မှာ</a> တင်ထားပါတယ်။
Lion မှာတစ်ခါတည်းပါလာတဲ့ ယူနီကုတ်လက်ကွက်ပါ၊ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အရင်လက်ကွက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသူတွေ အတော်ရိုက်ရခက်မယ်မှန်း သိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ဆို စာတစ်ကြောင်းဆုံးအောင် မနည်းရိုက်ယူရတယ်။
ကျနော်သတိထားမိသလောက် အခုယူနီကုတ်က searching and sorting လုပ်ပေးပါတယ်။ အောက်မှာ spotlight မှာ ကျနော်စမ်းသပ်ထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ keymagic keyboard နဲ့ ရိုက်ထားရင်လည်း ရှာပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် spotlight မှာတော့ keymagic kb နဲ့ရိုက်ရှာလို့မရပါဘူး။ ရှာတယ်ဆိုရာမှာ filename and folder တွေပဲရှာပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Document (pdf, docx, txt, etc..) တွေထဲ ရိုက်ထားသမျှကို ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ OS X ရဲ့ Dictionary ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှာ ရှာကြည့်ထားတာပါ။
ကဲ.. ကျနော်မနေ့က စမ်းသပ်မိသလောက်ပါ။ ပန်းသီးကတော့ မြန်မာစာအတွက် လိုအပ်တဲ့အုတ်တစ်ချပ်ကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ကျနော်ကတော့ ကျနော်မှာရှိနေတဲ့ မြန်မာစာနဲ့ပတ်သတ်သမျှအားလုံးကို ယူနီကုတ်ပြောင်းမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ ခုမှပဲဆုံးဖြတ်မိပါတယ်။
အဲဒီ font ဖိုင်လေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ရမလား ခင်ဗျာ...
ကိုစေတန် ပြောတာကတော့.. Lion ထွက်ပြီးရင် သူ့တို့နားကို reply ပြန်လုပ်ပြီး.. ပိုကောင်းအောင် တောင်းဆိုမယ်လို့ပြောတယ်.. အခုတော့ မထွက်သေးဘူးဆိုတော့.. ပါလာတဲ့ ကီးဘုတ်ကို ပဲ ကြိုးစားရိုက်ရမယ့်ကိန်းပဲ.. ကီးဘုတ်ကို ကြည့်လိုက်ကတည်းက လန့်စရာကြီး .. မနည်းကို ရှာရိုက်ရမယ့် ကိန်းပဲ..
ဘာပဲပြောပြော .. ပန်းသီးကို ကျေဇူးတင်ပါတယ်.. ယူနီကုတ်အတွက်ကြိုးစားပေးတဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေဇူးတင်ပါတယ်..
Download from here. I uploaded fonts only because I don't know where did Mac OS keep it's default input sources.
အဲဒါက ဟိုးအရင်တုန်းက mac မှာ သုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာ keyboard ပါ။ k က , t တ , m မ ဆိုပြီး လုပ်ထားတဲ့ keyboard ပါ။
Keymagic can search in spotlight. You just need to press spacebar once after you type the texts. Keyboard layout will not be changed very soon.
that is almost seem Mon Keyboard